Igumbi kwiNtliziyo yeCagliari 2
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguGiulia
Igumbi labucala kumbindi wesixeko, ukusuka apha ungafikelela ngokulula kuyo yonke into oyibonayo kwaye wonwabe eCagliari. Iivenkile kunye neendawo zokutyela ezidumileyo zigcwele kufutshane nesakhiwo. Onke amakhonkco ezithuthi zikawonke-wonke ayafikeleleka kwindawo ekufutshane.
Ngaphantsi kwendlu i-bus stop M leyo kwimizuzu elishumi ikuthatha ukuya e-Piazza Matteotti, i-terminum yazo zonke iibhasi, , esecaleni kwendawo yechweba kwaye ixhunywe ngokuthe ngqo kwisikhululo sezindiza ngesitimela.
Igumbi labucala + Igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo + igumbi lokuhlala eliqhelekileyo
Igumbi kunye negumbi lokuhlambela likwindawo engasese yendlu. Iindwendwe zinokusebenzisa igumbi lokuhlala elinombono wesixeko, apho unokuphumla ngokuhlwa kwaye, ekugqibeleni, utye ukutya okungadingi kuphekwa. Siya kukuvuyela ukukunika isidlo sakusasa esenziwe ngeti, ikofu, iijusi zeziqhamo, amanzi, iziqhamo kunye nezinye izinto zokubhaka.
4.82 · Izimvo eziyi-338
Kumda phakathi kweVillanova kunye nezithili zeSanbenedetto. Indawo izele ziivenkile kunye neendawo zokutyela ezininzi. Unokuhamba ngokulula ukuya kwizithili zembali: iCastello, iVillanova, iMarina kunye neStampace, apho uya kufumana imbali, imihlaba emihle kunye neendawo, iivenkile, ukutya okumnandi kunye nobomi basebusuku.
Ezantsi ungafumana imivalo, ipizzeria, isangweji ibha, imarike yedolophu, iivenkile ezinkulu kunye neemarike ezincinci, iziqhamo nemifuno, iposi, iibhanki, iivenkile, iindawo zokuhlambela iimpahla, kunye neenkonzo zazo zonke iintlobo.
Ndiya kufumaneka kwiimfuno kunye nolwazi. Ungaqhagamshelana nam nanini na.